mandeha irery na amin'ny vondrona voarindra - iza amin'ireo no fidiko? | Fitsangatsanganana tanteraka
Efa nanontany tena ve ianao raha ny mandeha irery na amin'ny vondrona voarindra? Eny, tsy maintsy lazaina fa fanontaniana izay tsy mora valiana foana. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria ao no ahitantsika safidy roa mitombina tanteraka sy miaraka amin'ny tombony ary koa fatiantoka.
El Tsangatsangana Mety ho traikefa fotsiny izany fa ny fandehanana anaty vondrona voarindra tsy lavitra eo aoriana. Noho izany, rehefa manana fisalasalana isika, dia tsara kokoa ny mamakafaka ireo hevi-dehibe rehetra, alohan'ny handraisana ny fanapahan-kevitra farany. Te-hanapa-kevitra indray mandeha ve ianao? Manana ny vahaolana izahay!
1 Mandehandeha irery: Ireo tombony lehibe sy fatiantoka lehibe
1.1 Tombony azo amin'ny dia irery
1.2 Tombony amin'ny fivezivezena irery
2 Mandehandeha anaty vondrona voarindra: Eny sa tsia?
2.1 Tombony amin'ny fitsangatsanganana amin'ny vondrona iray
2.2 Ny fatiantoka amin'ny dia ao anaty vondrona
3 Mandehandeha irery sa amin'ny vondrona voarindra?
Mandehandeha irery: Ireo tombony lehibe sy fatiantoka lehibe
Tombony azo amin'ny dia irery
Tsy misy isalasalana, ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fandehanana irery dia ny anananao fahalalahana bebe kokoa manapa-kevitra. Amin'ny lafiny iray, amin'ny resaka fandaharam-potoana sy amin'ny lafiny iray hafa, koa amin'ny faritra izay hotsidihinao. Satria na dia maka bebe kokoa na latsaka aza izay kasainao hatao dia azo ovaina hatrany amin'ny minitra farany ny drafitra ary izany dia manome anao izany fahalalahana noresahinay izany. Ankoatr'izay, satria mandeha amin'ny kaontinao ny zava-drehetra, dia marina fa afaka manangona vola be ianao rehefa mifantina ny toerana haleha, mandamina ny dia, ny hotely, sns.
Tombony amin'ny fivezivezena irery
Ho an'ny olona maro izay manana fahazarana mandeha ireryTsy manana drawbacks toy izany izy ireo. Fa raha tsy maintsy asongadinay ny momba azy dia ny tsy maintsy handaminantsika ny dia manontolo. Ka io no mety ho ampahany feno indrindra. Satria mety haharitra kokoa isika ary angamba, indraindray isika dia manao fahadisoana amin'ny safidin'ny hotely na amin'ireo hetsika nifanarahana. Fa rehefa mitranga io karazana 'pitsopitsony' io dia anekdota koa manampy ny fiainantsika. Ho an'ny maro dia ady manahirana ihany koa ny mitokana rehefa misy ny tsy fanelingelenana, satria tsy hahazo fanampiana isika.
Mandehandeha anaty vondrona voarindra: Eny sa tsia?
Tombony amin'ny fitsangatsanganana amin'ny vondrona iray
Ny iray amin'ireo lehibe dia izany hihaona amin'ny olona vaovao ianao, Ka io koa dia ho iray amin'ireo fotoana tsara indrindra amin'ny dia. Etsy ankilany, raha mandeha any amin'ny firenena hafa mety hanahirana ny fiteny ianao dia tsy ho toy izany intsony ilay vondrona. Satria hisy hatrany ny mpitari-dalana na mpandrindra ny dia hoy izy izay hikarakara ny zava-drehetra. Raha tsy izany, eo amin'ireo mpiara-miasa aminao, dia azo antoka fa misy olona miaro tena. Manana fiarovana bebe kokoa ianao, satria na mandeha tsara ny zava-drehetra, na raha misy ny olana dia ho voahodidin'ny olona foana ianao. Amin'ny lafiny roa, mety ho tsara kokoa ny zava-drehetra. Ary koa, inona no tsara tarehy kokoa noho ny mizara ireo fotoana lehibe amin'ny fiainantsika? Etsy ankilany, tsy tokony hohadinointsika fa tsy mila mandamina na inona na inona isika ary tonga ny fotoana sy aretin'andoha itehirizantsika. Na dia mety ampifandraisina amin'ilay hevitra hoe ho an'ny zokiolona fotsiny aza io karazana dia io, tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy, satria mihamaro koa ny tanora no manomboka azy ireo.
Ny fatiantoka amin'ny dia ao anaty vondrona
Ho an'ny maro an'isa, iray amin'ireo lehibe indrindra Tombony amin'ny fivezivezena amin'ny vondrona voalamina dia ny hoe tokony hanaraka ny fandaharam-potoana sy ny fitsidihana rehetra izay ao anatin'ny 'drafitra' ianao. Ka ho an'ny olona maro dia somary adin-tsaina ny mandany fotoana manokana rehefa te hanana bebe kokoa ianao. Indraindray hihena ny teboka sasany amin'ny andro. Satria tsy mitovy ny mandamina olona 30 fa tsy mandeha roa fotsiny. Noho izany, ny olan'ny fandaharam-potoana dia iray amin'ireo fatiantoka amin'ity raharaha ity. Tsy hisy fotoana hanaovana improvisation ary koa, hiaraka amin'ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra isika. Ka tsy maintsy hifanaraka amin'izy rehetra foana ianao. Ho fanampin'ny zava-misy fa ny dia an'ity karazana ity matetika dia somary lafo kokoa satria mandeha amin'ny zavatra efa voarindra isika ary midika izany fa mandoa ireo 'extra' ireo
Rehefa avy nahita ny safidy roa samy hafa ary nanampy ny tombony ary koa ny fatiantoka, tsy misy toa ny fakana tahiry. Mazava fa hiankina amin'ny filan'ny tsirairay avy izany. Satria raha aleonao mandoa vola bebe kokoa nefa hadino ny mikarakara, mividy tapakila ary manaova famandrihana, avy eo ny zavatra tsara indrindra dia ny vondrona voarindra. Mazava ho azy, amin'ny fiainana iainana, angamba mandeha irery ny safidy mety foana. Ho fanampin'izay dia afaka misafidy ny hanatsara sy hametraka ny fandaharam-potoana ianao irery ihany no manapa-kevitra.
Araka ny hitanao dia tsy afaka izahay fahazoan-dàlana handeha irery na amin'ny vondrona voalamina, satria miankina amin'ny tsiro sy ny filanao foana izany. Nefa afaka milaza aminao izahay fa, fara fahakeliny, indray mandeha, andramo ireo safidy roa ireo. Satria amin'ny roa ianao dia hahita tombony tena mendrika ny ankafizina. Raha misy fatiantoka miseho, dia azo antoka fa ho vitantsika ihany koa ny hamaha azy amin'ny fomba mahomby kokoa. Ary iza no hofidinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Mandehandeha irery sa amin'ny vondrona voarindra?